3.5. H घण्टाको लागि विमानमा अडिए Martech Zone
एक विमानमा 3.5. H घण्टाको लागि अडिए
बुधबार, जुन 4, 2008 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
म मौसमको साथ मुद्दाहरू चिन्छु र धन्यवाद दिन्छु कि एयरलाइन्सले मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छ। मेरी १ year वर्षीया छोरी आफ्नो कक्षाको साथ वाशिंगटन डीसीको पहिलो यात्रामा छिन्। उनी आइतबार राति आएदेखि उनले मलाई ह्वाइट हाउस, वाशिंगटन स्मारक, संविधान र अन्य साइटका फोटोहरू पठाउँदैछिन्।
हामीले यात्राको लागि धेरै पैसा तिरेका थियौं र उनको स्कूलले २० वर्ष भन्दा बढि यात्रा गर्यो। मलाई पक्का विश्वास छैन कि यिनीहरूले यस्तै प्रकारको यात्रा कहिले पनि अन्त्य गरेका छन्। केटी र अरु विद्यार्थीहरू साढे hours घण्टाको लागि टारामाकको एउटा प्लेनमा अड्किए। केटीले मलाई बोलाए र सोध्यो यदि उनी आज बिहान उनको अन्तिम पैसा खर्च गर्न सक्छिन् भनेर सोधे ... मैले उनलाई अगाडि बढ्न भनें। अब उनी केहि खानेकुरा किन्न सक्दिनन् र उनी भोकाइन्।
शिक्षकहरू पागल छन्, विद्यार्थीहरू आँसुले थाकेका छन्, र एयरलाइन्सले मलाई बताउन सक्दैन जब उडान छोड्ने छ। अहिले, यो आधी रात भन्दा अघि हुने छैन जब उडान यहाँ आउँदछ। मैले एयरलाइन्समा कल गर्न प्रयास गरें, एक सन्देश पाए। मैले स्थानीय समाचार कल गर्ने पनि प्रयास गरें र उनीहरूले खास मतलब गरेनन्।
अमेरिकी एयरवेज, मैले तपाईंलाई मेरी छोरीको ख्याल राख्न भरोसा राखें र तपाईंले विश्वासका साथ धोका दिनुभयो। मलाई मतलब छैन कि तपाईं उसलाई सुरक्षित राख्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर kids. hours घण्टाका लागि बच्चाहरूको एउटा समूहलाई विमानमा लक नगर्नुहोस्।
एयरलाइन्सहरु लाई वास्तवमा सीमित राख्नु पर्छ, सायद minutes 45 मिनेट देखि एक घण्टा सम्म, उनिहरुलाई मान्छेहरु लाई गेटमा फिर्ता ल्याउनु भन्दा पहिले। यदि त्यहाँ गेटमा अर्को प्लेन छ भने, यसलाई सार्नुहोस्। त्यो भन्दा बढी अडिनु हास्यास्पद छ। म यसको यात्रालाई बिगार्न नदिन कोशिस गर्दैछु तर म वास्तवमै उनलाई नराम्रो महसुस गर्छु।
टैग: बहादुरनकोडग्राहकबैठकको मृत्युसमानुभूति बजारमार्क ईन्गवेरट्याब्लेट संस्करणहरु
एप्पलले माइक्रोसफ्टबाट नोट लिइरहेको छ?
तपाईं सँधै ब्लगिंग हुनुहुनेछैन
जुन 4, 2008 मा 9: 53 PM
मैले सबै मात्र उडानमा छोडिदिएँ, जुन यसले केहि भनिरहेको छ जुन मलाई ड्राइभिंगले कत्तिको घृणा गर्छ। तर तपाईंको जस्तो कथाहरूले स्थानमा पुग्न मलाई झनै अनिच्छुक तुल्याउँछ। समाचार रिपोर्टहरू यस्तै गर्नुहोस्:
त्यहाँ पक्कै राम्रो तरिका हुन सकेको छ। उच्च गति रेल? जेट प्याकहरू? ट्रान्सपोर्टरहरू?
जुन 4, 2008 मा 10: 10 PM
म उच्च गति रेल हेर्न मन पराउँछु! मेरो साथीले ड्राइभिंग वा उडानको सट्टा शिकागोमा ट्रेन लिन्छ र उसलाई यो मनपर्दछ। मैले जाँच गरें र यस्तो लाग्दैन कि उनीहरूसँग इन्टरनेट पहुँच छ, यद्यपि। सायद एउटा स्प्रिन्ट USB ले काम गर्न सक्दछ।
म इमान्दार भई लाग्छ अब उडानको साथ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो धेरै किफायती छ। त्यहाँ यति धेरै प्रतिस्पर्धा छ कि मूल्यहरु कम रहन छ - र यसले सबै स्ट्रिमलाई असर गर्छ। बरु म round०० वा सो भन्दा बढि एक गोल यात्रा मा खर्च गर्दछु र राम्रो व्यवहार गरिन्थ्यो।
केटी घरको लागि सुरक्षित र मध्यरातको बारेमा आवाज थियो। 🙂
हवाई यात्राको दुःस्वप्न २० वर्ष भन्दा बढि मेरो जीवनको ठूलो अंश थियो। तपाईले सम्झनाहरू फिर्ता ल्याउनु भयो, म शिकागोबाट पूर्वी ड्राइभको लागि हवाई यात्रा बाट बच्न प्रयोग गर्थें तर अब यो सस्तो उडान हो। धन्यबाद तपाईको जवान मानिस बाँचे तर मलाई लाग्छ कि यो तपाईको भन्दा कडा थियो!
यो गाह्रो थियो, तर तपाईं सहि हुनुहुन्छ। मेरो टाउकोको पछाडि म आफैंले भनिरहेको छु कि उनीहरूले कुनै कारणको लागि तिनीहरूलाई समातेको छ। म चाहन्छु कि उनीहरूले भर्खरै मात्र तिनीहरूलाई टर्मिनलमा राखेका थिए।
जुन 6, 2008 मा 4: 38 PM
एक विमान सवारी?!? नरक, जब हामी एटलान्टाबाट यात्रा गयौं, यो एक रातको रेल यात्रा थियो। तिम्रो छोरी हुनु पर्छ धन्यबाद.
र मैले हिउँमा १० माईल ना bare्गो खुट्टामा पैदल हिंड्नु प .्यो। अपिल दुबै तरिकाहरू! '-)
जुन 6, 2008 मा 8: 01 PM
म सुन्छु, माइक!
र त्यो पनि एयर कन्डिसन भन्दा पहिले थियो!